नमूना विद्यालय जनसेवामा स्कुल बसको व्यवस्था - Nigranitimes
होमपेज / मुख्य खबर / नमूना विद्यालय जनसेवामा स्कुल बसको व्यवस्था
असोज २७ गते, कानेपोखरी । नमूना विद्यालयको रुपमा स्थापित मोरङको कानेपोखरी –६, स्थित जनसेवा माध्यामिक विद्यालयले छात्र–छात्रा बोक्ने स्कुल बसको व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यालय परिवारले मंगलबार एक कार्यक्रमको विच स्कुल बसलाई पुजापाठ गरी विद्यालयमा रिवन काटेर भित्राएका छन् । कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले रिवन काटेपछि पुजापाठ गरिएको थियो । टाढाका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको मागलाई विद्यालयले सम्बोधन गरेको प्रधानाध्यपक दामोदर सिग्देलले बताए ।
३६ सिट भएको स्कुल बसमा ६० जना विद्यार्थी आट्ने क्षमता भएको बसले दर्वेशा, तल्लो हरकपुरबाट कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने १ सय विद्यार्थीलाई घरदेखी विद्यालय र विद्यालय देखी घर सम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिने प्रधानाध्यपक सिग्देलले बताउँछन् ।जनसेवा माविमा अहिले नर्सरी देखी १२ कक्षा सम्म विद्यार्थी १४ सयको हारहारीमा अध्ययनरत छन् । विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको रुपमा कक्षा ९ देखी १२ सम्म बाली बिज्ञान, कक्षा ११ र १२ मा शिक्षा, मानविकी र व्यवस्थापन संकाय पढाई भैरहेको छ ।
स्कुल बसको राजस्व छुट गरी विद्यालयले खरिद गरिएको र त्यसमा कानेपोखरी गाउँपालिकाको पनि आर्थिक लगानी हुने विद्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहप्रधानाध्यपक प्रमोद निरौला, शिक्षक राजकुमार बराल, शिक्षिका अनिता पौडेल, वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष मोहन प्रसाद अधिकारी, वडा नं. ६ का वडासदस्य मुना श्रेष्ठ लगाएत उपस्थित रहेका थिए ।